विचार : Sajha Network - Nepal's No. 1 Online News Portal
लैंगिक समानताका लागि समान सोच र व्यवहार
–हीरा कुवँर, गुल्मी । जिन्दगीमा पहिलो पटक आमा बन्दाको अनुभव लिदै थिए । प्रवास मेडिकल कलेजको १२ नम्बर क्याबिनमा नवजात शिशुलाई काखमा राखी दुध चुसाँउदै थिएँ म । साथमा श्रीमान् हिरा ए.सी. अनि बहिनी कला...
नारी दिवस र परिर्वतनसँगै पलाएको खुसी
-सुनिता कँडेल, गुल्मी । भनिन्छ, संसारमा दुईवटा मात्र जाती छ, एउटा पुरुष, अर्को स्त्रीजाती । जुन घर नारि हुन्छीन् त्यो घरमा लक्ष्मीको वास हुन्छ । नारि महान हुन् यी हाम्रो समाजमा महिलाहरुको निम्ति भनिने, सुनिने...
शिवरात्रिको महत्व र भित्रिएको विकृति
-सुनिता कंडेल । नेपाल भौगोलिक विविधताले धनी देश हो । यहाँ थुप्रै जातजातिका मानिसहरु बसोबास गर्दछन् । ती जातीहरुको आ–आफ्नो धर्म संस्कृति र रितिरिवाज रहिआएको छ । त्यस अन्तर्गत हिन्दुधर्म एक हो । यसमा धेरै...
प्रेम दिवस र युवापुस्तामा यसको प्रभाव
-सुनिता कंडेल । प्रेम धर्म, शक्ति र शान्ती हो । हरेक मानव हृदयमा प्रेम हुन्छ । प्रेम मानव जिबनमा हुने स्वचालित प्रकृया हो । प्रेमले सबैलाई मिलाउछ सबैलाई खुसिले बाच्न सिकाउछ । हामीले जहाँ निश्वार्थ...
-सज्जन ढकाल । भनिन्छ मानव जिन्दगी एक सारथी हो । जहाँ अनेक प्रकारका हजारौं परिदृस्य संगै माया प्रेम ममता स्नेह प्यार र उत्प्रेरणाको स्रोत संगै एक उमेरले भरिदै आएको बैँस बिसाउने स्थल तथा आपसी समजदारी,...
माघे सक्रान्ती पर्व र रुरुक्षेत्र रिडी
-सुनिता कंडेल । माघ १ गतेलाई माघे संक्रान्ति भनेर पर्वको रुपमा मनाउने गरिन्छ । माघे संक्रान्तिलाई नेपालमा विशेष पर्वको रुपमा मनाइने गरिन्छ । यो दिन खिचडी खाने पर्वको रुपमा समेत मनाउने गर्दछन् । यो पर्वमा खिचडी...
खुल्ला सरकार साझेदारीमा आधारित विकास
–हीरा कुवँर । गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा २०७५ मंसीर २४ गते गाउँपालिकाभित्र भइरहेका विकासका काम र ती काममा जनसहभागिता कस्तो छ भन्ने स्थानीय सरकार र नागरिक समाज बीचको छलफल आयोजना गरिएको थियो । छलफलको मुख्य उद्देश्य यो...
-सुनिता कंडेल । खै कहाबाट सुरु गरु, रेसुङ्गाका लोभलाग्दा सुन्दर दृश्य दिमागमा नाचिरहेका छन्, लेख्ने कलम चलिरहेको छैन् । मैले लेख्ने शब्दमा अट्दैन, मैले गर्ने बयानले पुग्दैन् । गुल्मी जिल्लाको गौरवको रुपमा रहेको रेसुङ्गा आफैमा...
-रवि किरण अधिकारी । १८ हजार मोरे तिनको समस्या हल गरेको छैन भनेर विप्लब पार्टीले आफ्नो अडान छोडेका छैनन् । उनिहरुको समस्या हल गर्नुपर्छ । राजाले फेरी संख फुक्दै छन् यस्मा को-को सामिल हुन्छन हेर्न...
-विनोद अर्याल। शिक्षा जस्तो अति महत्वपूर्ण क्षेत्रमा राज्यको प्रमूख उत्तरदायित्व हुने मान्यतामा उभिएर राज्यत्तोर कर्ताहरुको भूमिकालाई पूर्ण ब्यवस्थापन गर्दै सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने राज्यको भूमिका एकदमै कमजोर छ । जसरी निजी र सरकारी...
-रवी किरण अधिकारी । हो बस्ने मन नै छैन मेरो देशमा । किनकि यहा कुनै शान्तिको बाटो देखिदैन, दिन दाहाडै बलात्कार गुन्डागर्दी घुसपेठ जातियताबाद कृपाबाद ठुलोबाद त सानोबाद, भ्रष्टाचार, अत्याचार कुनै शान्तिको अभिलासा दिलाएन सरकारले...
घुच्चे दाइको कारुणिक जीवन कथा
-सज्जन ढकाल । प्रकृति पनि कस्तो विचित्रको छ । भगवान पनि उनका लागि पापी नै होलान सायद । जिन्दगीमा बोल्न नसक्नु, सहजताका साथ हिड्न नसक्नु, हिड्यो त लठ्ठीको सहायता लिनुपर्ने बाध्यता जन्म कहाँ भयो, नाम...
–हीरा कुवँर । होचो कद, पातलो शरीर, शिरदेखि पाउसम्म ढाकेको कालो कपडाभित्रबाट मसिना हातले गाडीवालालाई दिएको २० रुपियाँ भाडा । सायद नियमित गाडीमा चढिरहने यात्रुले ड्राइभरलाई पटक पटक भाडा सोधिरहंदैनन् र यसरी नै नसोधी भाडा...
-दर्शन सुनार। आखिर जीवन भनेको यस्तै रहेछ । हामी प्रवासिको दशै तिहार जस्ता महान पर्वहरुमा पनि दुई थोपा आँसु लुकाएर लाखौ रहरहरु थाती राखेर एक्लै रुनु वाध्यता एकातिर र आफ्नै मन दुखले छेद-बिच्छेद हुदा पनि...
गलत मोबाइल नम्बर डायल गर्दा बसेको माया
-सज्जन ढकाल । भनिन्छ विश्वमा प्रविधीले ठूलो फड्को मारिरहेको छ । यहि निसाना र सन्दर्भको वरिपरि हामीहरु घुमिरहेका छौ । कोहि भन्छ्न जमाना फेरियो कोहि भन्छन समय बदलियो कोहि भन्छन समयको बिकास क्रम हो ।...